အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ် – Pann Satt Lann Books
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Personal Branding The Brand in You စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့ပြီး ယခုစာအုပ်က စာရေးသူရဲ့ ဒုတိယမြောက် စာအုပ်ဖြစ်
စာရေးသူရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေ၊ ဆုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ သင်တန်းသူတွေ၊ လေးစားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအပေါ် အခြေခံပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်း ၃ ပိုင်း ပါဝင်ပြီး ပထမပိုင်းကို Exploring Me (ဆန်းသစ်သောအတွေ့အကြုံများ နှင့် ကျွန်မ), ဒုတိယပိုင်းကို Designing Me (တည်ဆောက်ခြင်းများ နှင့် ကျွန်မ), တတိယပိုင်းကို Mature Me (ရင့်ကျက်ခြင်းများနှင့် ကျွန်မ) ဆိုပြီး ခွဲခြားထားပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်မဲ့ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ မိသားစု၊ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ စိတ်ခံစားချက်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စတာတွေကို စုံစုံလင်လင်လေး ထည့်ရေးထားပါတယ်။
ဆရာမ ဂျူးလည်း အမှာစာ ​ရေး​ပေးထားတဲ့ ဒီစာအုပ်ကလေးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆန်းစစ်ဝေဖန်ပြီး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်ချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့ ကိုက်ညီပြီး ရေရှည်လည်း ခံမဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ကိုယ့်ဘဝကို အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် လက်စွဲစာအုပ် ဖြစ်လာမှာပါ။
5.7 × 0.4 × 8.1 inches
ပီတိအိမ်စာပေ၊ 2021 ဇန်နဝါရီလ (ပ-ကြိမ်)
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ် အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု5ရှိပါသည်။
Mya Thandar Kyaw – January 15, 2021
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်လဲ စိတ်ကိုဘယ်လိုထားသင့်လဲ
Pyae Sone – February 21, 2021
ဒီစာအုပ် မှ ဘဝ ကို ဘယ်လိုနည်း နဲ့ ရှင်သန်သင့်တယ်ဆိုတာ ဘေးနားက ထိုင်ပြောပြနေသလိုပါပဲ
Yun Yati (verified owner) – January 28, 2022
ညမအသက်က 13 နှစ်ပါ ဒီစာအုပ်ကိုပထမဆုံး review ပေးချင်ပါတယ်ရှင့်
ညမတို့စာအုပ်တအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုရင် author ကဘယ်သူလဲ စာထဲကအကြောင်းအရာက ယုံကြည်လို့ရပါ့မလားဆိုပီး ဆန်းစစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာမထက်ရည် (Htet Yie) က BRAND YOU CO.,Ltd ရဲ့ Founder and Managing Director တစ်ဦးလည်းဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း ပြီးတော့စာထဲကအကြောင်းအရာတွေဆိုရင်လည်း တကယ့်ကို perfect ဖြစ်တာရယ်ကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဖတ်နိုင်ပါတယ်ရှင့် ပြီးတော့ ဒီစာအုပ်လေးက ညမတို့တွေအရမ်းကိုဖတ်သင့်တယ့်စာအုပ်တစ်အုပ်ပါရှင့် ညမအပါအဝင် ညမနဲ့ရွယ်တူမိန်းကလေးတွေကအစ အခုခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ social media တွေ,အလှအပတွေပေါ်မာပဲအချိန်ပေးလာတာတွေကြောင့် စာအုပ်စာပေလူ့မိတ်ဆွေဆိုတာ ပျောက်ဆုံးလုနီးဖြစ်နေပါပြီ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အိမ်မာ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေ ရှိခဲ့ရင်ဒီစာအုပ်ပေးဖတ်ပေးပါရှင့် ညမတို့မိန်းကလေးတွေအဖတ်သင့်ဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ပါ စာဖတ်တာများလာရင် စာဖတ်ရတာ တကယ့်ကို ကျေနပ်စရာကောင်းမှန်းသိလာရပါလိမ့်မယ် အခုတလော ညမလည်း online class တက်တဲ့အချိန်တွေနဲ့ စာသင်တဲ့အချိန်တွေကလွဲပြီး ဒီစာအုပ်လေးကိုပဲ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်နေပါတယ်ရှင့် ညမအတွက်တော့ စာဖတ်ရတာ ဝါသနာလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ ပြီးတော့ ဆရာမကတအားကို တော်ပါတယ်ရှင့် ဒီစာအုပ်ဖတ်ရင်ညမတို့မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား,အလှအပကြောင်းတွေရော self-confidence အကြောင်းတွေနဲ့တခြားပြင်ပဗဟုသုတတွေရနိုင်ပါတယ်ရှင့် ညမဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးဆရာမကို အရမ်းသဘောကျမိပါတယ်ရှင့် ပြီးတော့ ညမအတွက်တော့ဆရာမက ညမဘ၀ရဲ့ အနစ်သက်ဆုံး mentor တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ့်ရှင့်
Thet Phoo Wai – January 30, 2022
အမျိုးသမီးတွေအတွက် အဓိကရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးမို့ ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ဖတ်ဖို့ကောင်းနေပါပြီရှင့်
May Su Eain Thu – June 4, 2022
I’m 22 years old and I find this book amazing and really helpful to find my life goal and passion. feels like attendingapersonal branding course. A lot of valuable information! ladies ! you all should read it. you’ll never regret it. Believe it or not.
ထက်ရည် (Htet Yie) စာအုပ်များ